Aadan Maxamed Cali: Waa kuma Fuundigii la xag-jireeyay ee 'dilaaga' noqday?
Aadan Maxamed Cali: Fuundigii la xag-jireeyay ee 'dilaaga' noqday
By WARIYAHA BOOSAASO , GAROWE ONLINE
Shaqsigan oo ka tirsanaa Daacish ayaa qayb ka ahaa falal khaarijin oo dhowr ah. Hadaba, waa qof noocee ah? | Xuquuqda Sawirka: SNTV via GO
BOOSAASO, Puntland – Wallow aysan lahayn awood baahsan sidda Al-Shabaab, haddana Daacishta Soomaaliya, waa khatar muuqata oo ka jirta qayb kamid ah Soomaaliya, taasi oo fulisa weeraro wejiyo kala duwan leh.
Kadib markii uu tababarka u soo dhamaadey, waxaa xeradda ugu yimid horjoogyeyaal ka tirsan Al-Shabaab oo kala ah; Fu'aad Shongole iyo Cali Dheere, afhayeenka, kuwaasi oo abaalmarinayo gudoon-siiyey.
"Qofkii waxaa la siiyey min 20-dollar," ayuu Saciid ku yiri wareysiga, isaga oo intaasi raaciyey in isaga uu go’aan saday in uu noqdo guutada wacyi gelinta dadweynaha ee Xisbida kana howlgasha gudaha Beledwayne.
"Kadib muddo, waxaan codsaday in la ii gudbiyo codsi guur, waana la ii gudbiyey," ayuu raaciyey, balse lacagtii uu ku aqal-geli lahaa oo uu musuq-maasuq Cabdullaahi ayaa ku dhalisay in uu qaato go’aanka bixitaanka.
"Markan intaasi ogaadey ayaa waxaan qaatay fasax bil ah. Aniga oo ku darsaday 20 maalmood oo kale ayaa waxaan aaday Boosaaso, halkaasi oo aan ka shaqeysanayay kana ahaa fuundi," ayuu xusay.
"Nin kale oo reer Puntland ah, oo la yiraahdo Bishaar, ayaa adeega iga qaadi jiray," ayuu daba dhigay, isaga oo carabka ku adkeynaya.
Intii ay tababarka ku jireen marbaa la isku dayey in la khaarijiyo markii uu su'aal ka keenay joogitaankooda goobtaasi, sidda ay aaminsan yihiin laamaha sirdoonka.
"Isaga oo madoobaadey oo rafaadsan wuxuu nagu yiri 'hala dulqaato rag kale baa hortiina halkaan joogay' waxaa la socday nin kale oo la yiraahdo Af-yare oo u qaabilsan sameynta qaraxyadda," ayuu Aadan shaaciyey.
Isaga oo sharaxaya qaabka dagaalameyaasha Daacish ku yimaadan degaanadda Puntland gaar ahaan Boosaaso ayaa wuxuu yiri: "Qof baa damiinaya oo oranaya 'waa shaqaale aan dalbaday ama Adeer baan u ahay".
"Waxaan dilnay nin lagu magacaabo Bishaar oo noola sheegay in uu ka tirsanaa Al-Shabaab," ayuu hadalkiisa ku daray. "Kadib markaan howsha fulinay, waxaa noola tuuray hal dollar, gurigeyga ayaan ku aaday".
Dilka labaad oo uu Aadan gacantiisa ku geystay ayaa waxaa isla gudaha Suuqa Bakaaraha uu ku naf-gooyay ruux kale oo la yiraahdo Axmed Shiikhaal, oo ahaa gudoomiye laameed kana ka tirsanaa saldhiga Baar Ubax
Isla maalintaasi shabakadiisa waxay isla suuqa Bakaaraha ku dishay Cabdullaahi Dheere, oo isana ahaa sarkaal ka tirsan ciidamadda Soomaaliya.
Arrimaha naadirka ah
Sheekooyinka aadka ugu cusub falalka argagixiso ee Soomaaliya ayna soo kordhisay Daacish ayaa waxaa qayb ka ah in ay muuqaalo ka duubto xubnaha ay dilayso, kadibna ay baahiso, taasi oo argagax abuurtay.
"Waxay u adeegsadaan duubista muuqaaladda moobeelada waaweyn ama kaamirooyinka yar-yar, waxaana qaabilsanaa Cismaan," ayuu daba dhigay.
Aadan, oo isaga oo dhaawac ah lagu qabtay fal dil ah oo degmadda Yaqshid ugu geysteen askari, ayaa haatan ah suge dil toogasho, maadaama ay maxkamadda xukunkaasi garka u gelisay.
Al-Shabaab iyo Daacish oo duqeyn lagula beegsaday gobolka Bari
Puntland 26.04.2019. 16:31
Weerarada cirka ayaa kusoo beegmaya xili uu jiro ugaarsi ay labada koox isku hayaan.
Madaxweyne Deni oo magacaabay Maareeye garoon diyaaradeed
Puntland 19.01.2020. 07:13
Puntland oo hirgelineysa hab casri ah oo dhanka xisaabaadka ah
Puntland 25.12.2019. 18:01
Khasaaro ka dhashay Dooni badeeco u sidday Boosaaso oo degtay
Puntland 15.10.2019. 18:55
Askari nin u dhashay Kenya ku dilay Boosaaso oo la qabtay
Soomaliya 12.08.2019. 17:05
Imaaraadka oo shaaciyey mowqifkiisa qaraxii lala xiriiriyay Qadar
Soomaliya 31.07.2019. 08:45
Mas'uuliyiinta DF oo laga mamnuucay Puntland oo xilliga Doorashada
Puntland 29.12.2018. 13:13
Puntland: Laba wiil oo Jaamiciyiin ah oo lagu dilay Boosaaso
Puntland 15.09.2018. 10:36